Shabakadda Amiirnuur – Page 21
Sarkaal Ka Tirsan DF oo Lagu Dilay Duleedka Muqdisho Iyo Qarax Ka Dhacay S/Xoolaha.
Sarkaal ka tirsan DF ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu khaarajiyay degaan dhaca duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoo la sheegayo inuu kamid ahaa Boliska. Sarkaalkan oo la oran jiray Cabdi Maxamuud (Cabdi Dheere) ayaa ka hor inta aan la beegsan waxa uu kasoo baxay magaalada Muqdisho waxaana uu ku […]
Wilaayaatka islaamiga ee dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya waxaa si habsami leh uga socda qeybinta Xoolaha nool ee Zakada. Boqolaal qoys oo ku nool gobolka Hiiraan ayaa helay Xoolo Zaka ah oo uu uqeybiyay Xafiiska Zakawaatka Xarakada Shabaabul Mujaahidiin. 560 qoys oo ku dhaqan galbeedka iyo Bariga gobolka Hiiraan […]
Sawirro: Wilaayada Galgaduud oo Qeybisay Kumannaan Neef oo Sako Ah.
Wilaayada islaamiga ah ee Galgaduud ayaa qeybisay kumannaan neef oo Sako ah maalintii shalay iyadoo ay ka faa’iideysteen boqollaal dad weyne ah oo kamid ah dan yarta. Degmada Ceelbuur ayaa hawshan laga billaabay waxaana lagu wadaa in degmooyin iyo degaano kale laga qeybiyo maanta iyo maalmaha soo socda insha’allah. Tirada […]
Suldaan Gar Yare: “100 Sano Kadib Dagaalkii 1-aad Ee Yurubta Dhex Maray Isbadal Ayaa Ka Muuqda Caalamka. (Dhageyso)
Aqoonyahan Suldaan Maxamad Gar Yare ayaa is dul taag ku sameeyay dagaalkii 1-aad ee Yurubta dhex maray balse ay ugu magac dareen dagaalkii 1-aad ee dunida. Haddaba maxaa u sabab ahaa inuu dhoco dagaalkan? Qaab ceenkee ah ayay u kala safnaayeen dowladihii dagaalamayay? Imisa milyan ayaa ku dhimatay dagaalkaas? 100 […]
2 Gaari oo Taw Ah Oo Amisom Looga Gubay Muqdisho Iyo Sh/Hoose.
Muqdisho iyo Shabeelaha Hoose waxaa maanta ka dhacay laba weerar oo khasaare culus loogu geystay ciidamada Amisom ee qeybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay wadanka. Muqdisho haddaan ku horreyno waxaa ciidamada shisheeye gaari Taw ah looga burburiyay degaanka Suuqa xoolaha waxaana looga dilay 2 askari iyadoo 3 kale ay uga […]
Faahfaahin Kasoo Baxaysa Qarax Khasaare Geystay oo Askarta Puntland Lagula Beegsaday Bari.
Guutada qaraxyada ee Xarakada Al-Shabaab ayaa qarax la beegsatay gaari ay saarnaayeen ciidamada Puntland oo marayay inta u dhaxaysa Galgala iyo Boosaaso. Gaarigan oo ka yimid dhanka Galgala ayaa waxaa qaraxa lagula beegsaday degaanka lagu magacaabo Sugurre, waxaana uu burburiyay qeybo kamid ah gaariga iyadoo sidoo kale ay ku dhaawacmeen […]
Khasaare Culus oo Malleyshiyaadka Suufiyada Kasoo Gaaray Dagaal Ka Dhacay Duleedka Guriceel.
Wararka naga soo gaaraya degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxay ku waramayaan in saaka aroortii ay duleedka degmada ku dagaalameen ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab iyo malleyshiyaadka suufida ee Amxaaro kalkaalka ah bulshada inteeda badanna u taqaano “Mushrikiinta” Dagaalkan ayaa waxa uu yimid kadib markii ay Mushrikiintu soo weerareen degaanka […]
Barnaamijka Diiradda Jimcaha oo todobaadkiiba maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan laguna soo qaato mowduuc muhim ah ayaa waxaa maanta diiradda lagu saaray Suufiyada iyo dhaqamada ay caanka ku yihiin bishan oo kale, iyadoo macluumaad badan oo laga soo xiganayo kutubta ugu caansan lagu soo bandhigay. […]
Markii ugu horraysay dowladda Sacuudiga ayaa xaqiijisay in si ulakac ah loo dilay Wariye Jamaal Khaashuqji oo ahaa saxafi mucaarad Sacuudiyaan ah oo lagu dilay magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga. Markii ugu horraysay dowladda Sacuudiga ayaa xaqiijisay in si ulakac ah loo dilay Wariye Jamaal Khaashuqji oo ahaa saxafi mucaarad […]
Laba Gaari oo Uural Ah oo Ciidamada Itoobiya Looga Gubay Gobolka Bay.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta gobolka Bay ku weeraray askar Itoobiyaan ah oo ku socdaalayay inta u dhaxaysa magaalooyinka Baydhabo iyo Buur-Hakaba. Ciidamadan oo kolonyo ahaa islamarkaana kasoo baxay magaalada Baydhabo kuna sii jeeday degmada Buur-Hakaba ayaa waxaa dhax u galay askar ka tirsan Milatariga Al-Shabaab. Ilo wareedyo ayaa […]